इतिहासकै महँगो विश्वकप तर आयोजक रुस किन कमजोर ? | Ratopati
इतिहासकै महँगो विश्वकप तर आयोजक रुस किन कमजोर ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeजेठ ३१, २०७५ chat_bubble_outline0
रुसले आठ वर्षको समय र ७ सय बिलियन रुबल खर्च गरेर विश्वकप आयोजना गर्दैछ । आयोजनाका हिसाबले यो ८८ वर्षे विश्वकप इतिहासकै सर्वाधिक महँगो प्रतियोगिता हुनेछ । नयाँ पूर्वाधार र नयाँ विकासमार्फत रुसले आफ्नो आधुनिकताको चिनारी गर्वसाथ विश्वमाझ गराउँदैछ । तर दुग्भार्य यति नै बेला रुसको फुटबल टिम खराब समयबाट गुज्रिरहेको छ । फिफा वरियतालाई आधार मान्दा विश्वकपमा सहभागी ३२ टोलीमध्ये आयोजक रुस सबैभन्दा कमजोर टोली हो । रुस फिफा वरियताको ७०औं स्थानमा छ ।
आखिर रुस किन यति कमजोर भयो ? यसको जवाफ खोज्न सन् २००० को मध्यतिर फर्कनुपर्छ । जतिबेला डायनामो मस्कोले युरोपकै शक्तिशाली क्लब बन्ने सपना देखेको थियो । एक्लेसी फेडोर्यचेभले सन् २००४ मा क्लब किनेपछि यो कथा सुरु भएको थियो । फेडोर्यचेभ फुटबलमा अर्बौं लगानी खन्याउने ठूला तेल व्यापारीमध्येका पहिलो हुन् भन्दा फरक पर्दैन । उनले तेल कार, स्टिल, पानीजहाजलगायतका थुप्रै व्यापारबाट कमाएको लगानी आफ्नो बाल्यकालदेखिकै प्रिय क्लबमा लगाए ।
पोर्चुगिज एजेन्ट जर्ज मेन्डिसलाई क्लबमा क्लबमा खेलाडी भित्र्याउने जिम्मा दिए ।
त्यसपछि के चाहियो, सन् २००४ को च्याम्पियन्स लिग विजेता पोर्चुगिज क्लब पोर्टोका धेरैजसो खेलाडी यस क्लबमा ठूलो धनराशीमा आबद्ध भए । पोर्चुगलका चर्चित खेलाडी नुनो रिकार्डो १६ मिलियन डलरमा क्लब भित्रिए । लगत्तै कोस्टिन्हा, डेर्ली, गिआवकास, सेइटारडिसलगायत तत्कालीन च्याम्पियन्स लिग विजेता टोलीका खेलाडी डायनामो आए । पोर्चुगलकै स्पोर्टिङ सीपी, इटलीको बार्गालगायत क्लबका खेलाडी पनि डायनामो मस्को आइरहेका थिए । यर्ही समय हो, जतिबेला ब्राजिलका थियगो सिल्भाले पनि एक वर्ष लोनमा मस्कोबाटै खेलेका थिए । २० वर्षका सिल्भा त्यतिबेला टोलीका प्रमुख खेलाडी भने थिएनन् ।
अहिले रुसी खेलाडीको वृद्धिविकास तीव्र गतिमा छ । उनीहरूले पाउने तलब साँच्चै आकर्षक छ । रुसी लिगमा सर्वाधिक आम्दानी गर्ने मिडफिल्डर अर्टेम डेज्युवाको वार्षिक तलब ३ दशमलव ६ मिलियन डलर छ । उनी जेनिथ सेन्ट पिटर्सवर्गबाट खेल्छन् । यहीँ क्लबमा अलेकसान्दर कोकेरिनले ३ दशमलव ३ मिलियन कमाउँछन् । क्रास्नोडरबाट खेल्ने फ्योडोर स्मलोभले २ दशलमव ९ मिलियन कमाउँछन् । के यर्थाथ बिर्सन मिल्दैन भने विश्वका ठूला लिगमा यी खेलाडी जतिका खेलाडीहरू बेन्चमै हुन्छन् । उनीहरूले कम पैसा पाएका हुन्छन् र राम्रो तयारी गर्दै ठूलो अवसर कुरेर बस्छन् ।
जेनिथ क्लबमा गाजप्रोम कम्पनीको स्वामित्व छ । सरकारी लगानीमा सञ्चालित यो कम्पनी रुसको सबैभन्दा ठूलो ग्यास कम्पनी हो । सन् २००९ देखि २०११ सम्म यो कम्पनी विश्वकै सबैभन्दा धेरै फाइदा गर्ने कम्पनी थियो । तर २०१४ मा रुसले युक्रेनको क्रिमिया कब्जा गरेपछि परिस्थिति फेरियो । रुसमाथि पश्चिमा समुदायले नाकाबन्दी लगायो । रुबेलको भाउ एक्कासि आरालो लाग्यो । सन् २०१३ को तुलनामा ०१४ मा ग्राजप्रमको नाफा ८६ प्रतिशत कम भयो । अर्थात अब हल्क र विट्सेललाई तिर्ने पैसा जेनिथसँग रहेन ।
सन् २०१६ मा बोयस पनि चीन गए । रुसी फुटबलमा बाँकी रहेको ग्ल्यामर क्रमशः घट्दै गयो ।
जतिबेला म पेरिसमा कवाडी उठाउँथेँ
फ्रान्स : सशक्त टोली, गलत प्रशिक्षक !